49 लागि परिणाम adventure time games
दुष्ट किरा राजा देखि राजकुमारी बचत गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो महल मा वास्तविक कृमि राजा पाउन सक्छन्? अजीब प्राणीहरू पराजित र जेक र Finn मदत।
यो कैंडी राज्य महल मा सुटुक्क छिर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ जो ब्वाँसा द्वारा कब्जाको अन्तर्गत छ। Finn, जेक, राजकुमारी बबलगम, Marceline, BMO, र पनि LSP कहीं व्यस्त संग, यो मा कैंडी नागरिक गरौं र राख्न महल गेट व्यवस्थापन गर्न अप तपाईंलाई छ
युवा नायक Finn सबै मानिसहरूलाई डर पैदा गर्दै सबै राक्षस ooo को भूमि छुटकारा गर्न आवश्यक छ। मञ्चहरूमा बीच र तिनीहरूलाई सबै नष्ट गर्न प्राणीहरू आफ्नो आक्रमण सुरु।
यो क्रिसमस मा, Finn जेक उद्धार गर्न सबै राक्षस लड्न छ। उहाँलाई यो मिशन पूरा सहयोग गर्नुहोस्। मेरी क्रिसमस!
फिन र जेक जहाँ त्यहाँ अनौठो जीव हो, जंगल हराएको प्राप्त, तपाईँ तिनीहरूलाई छुन भने, मोर्दकै को ऊर्जा स्तर कम हुनेछ। कृपया मद्दत Finn र जेक अन्य anima मार्न, त्यसपछि जनावर ढुङ्गा फेंक स्पेस पल्ट प्रयोग चट्टान धक्का
साहसिक समय हाम फाल्न warterfall
यो साहसिक समय खेल श्रृंखला को खेल हो। यो खेलमा, Finn र जेक झरना मा सरल छ। तिनीहरूलाई आफ्नो माउस क्लिक गरेर पत्थर भन्दा जम्प गरेर यो मिशन पूरा सहयोग गर्नुहोस्।
साहसिक समय अन्धकार Halloween
यो खेलमा, Finn र जेक हेलोवीन रात मा एक साहसिक छ, तिनीहरूलाई सडक सबै राक्षस मार्ने र आफ्नो मिशन पूरा गर्न मद्दत गर्छ। भाग्यले साथ दिओस्!
साहसिक समय हास्यास्पद जम्प
Finn सकेसम्म धेरै पटक डोरी मा हाम फाल्न मद्दत गर्नुहोस्। खेल्न तपाईँको माउस प्रयोग
साहसिक समय भाग्ने भूत मुलुकमा
यो साहसिक समय श्रृंखला खेल मध्ये एक छ। यो खेलमा, Finn भूत देशमा गुमाए, कृपया उहाँलाई एक तरिका पत्ता मदत, तर गरेको बाटोमा पनि राक्षस ध्यान गरौं, हामी Finn आक्रमण गर्नेछ।
साहसिक समय: मंगल छोरा
फिन जहाँ धेरै अनौठो जीव र खतरनाक छन् मंगल, मा एक रोमांचक छ, कृपया त्यो आक्रमण फिन प्राणीहरू मदत र यो खेल को सबै स्तर पूरा गर्नुहोस्।
साहसिक समय शाही ruckus
शाही Ruckus तूफान शाही Ruckus मा Marceline र Lumpy स्पेस राजकुमारी संग तहखाने! आफ्नो राजकुमारी दिन hijinks पछि, Marcy र LSP थप समस्या खोजी गर्न गए। क्रिस्टल आँखा, को बाक्लो राज्य caverns, को कालकोठरी मार्फत आफ्नो बाटो बनाउन एक
साहसिक समय संसारको जित्न
फिन अनौठो शहर, जहाँ राक्षस र अवरोध पत्ता लगाउन। कृपया तिनीहरूलाई सबै शत्रुलाई खेल को सबै स्तर नष्ट र हटाउन विशेष सीप प्रयोग गर्न मदत।
साहसिक समय: यी गांठ
हे Glob, तिमी मान्छे! Lumpy स्पेस राजकुमार आफ्नै खेल छ। यी गांठ मा रोशनी चोर्न अन्य पार्टी अतिथि मा टक्कर। Fionna, केक, मार्शल ली, ज्वाला राजकुमार, र थप विरुद्ध बन्द आफ्नो गांठ नृत्य! तपाईं उत्तेजक गांठ छ प्रमाण दिन्छ।
राजकुमारी बबलगम शाही Bash फ्याँक्दैछन्! तर यो कुनै पनि पार्टी छैन; यो साहसिक समय लडाई पक्षको! त्यसपछि उन्मत्त 3-मा-3 लडाई को लागि साथीहरूसँग टीम आफ्नो च्याम्पियन चयन। जस्तै आफ्नो मनपर्ने साहसिक समय नायक र खलनायक रूपमा लड्न,
साहसिक समय अन्धो finned 2
फिन अन्धा छ! उनी र उनको विश्वासी मित्र र साथी जेक फेरि दुष्ट देखि कैंडी राज्य बचत गर्नु पर्दछ। माउस मात्र नियन्त्रण गर्छ। उल्लसित चाल प्रदर्शन, छिटो गर्न सक्छन् तपाईं रूपमा चलाउन र तपाईं आफ्नो बाटो मा सामना गर्नेछ जो सबै अवरोध हटाउन।
साहसिक समय हीरा वन
यो खेलमा, Finn र जेक को रहस्यमय वन पूर्ण हीरा मा साहसिक सामेल। कृपया मद्दत Finn सबै हीरे सङ्कलन र खेल को सबै स्तर पारित।
कसले भिडियो खेल बनाउन चाहन्छ ?! यो साहसिक समय खेल सृष्टिकर्ता तपाईं Finn र जेक सुविधा बीजीय साहसिक समय खेल निर्माण गरेको गरौं! प्रत्येक वर्ण विशेष आक्रमण र शक्ति छ। अन्य पीएलए द्वारा निर्मित तपाईंको साथी वा प्ले खेल संग आफ्नो खेल साझेदारी
साहसिक समय स्केटबोर्डिङ्ग
Finn र जेक यो खेल मा सबै स्तर समाप्त गर्न मद्दत गर्छ।
साहसिक समय तहखाने
यो साहसिक समय खेल हो। Finn हीरे सङ्कलन र खतरनाक ब्लेड हटाउन मद्दत गर्नुहोस्। प्ले गर्न माथि र तल कुञ्जीहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
साहसिक समय स्याउ ल्याउन
साहसिक समय एप्पल लिनुहोस्: जेक र Finn एउटा नयाँ साहसिक। बाटो, शुभकामना मा अवरोध ध्यान जोगिन सकिन्छ तिनीहरूलाई प्रत्येक स्तर मा आफ्नो साहसिक पूरा गर्न सबै धन सङ्कलन मदत,!
क्रिसमस रात, ज्याक उपहार बक्स पकड तर कालो उपहार बक्स पकड छैन मदत। खेल्न तपाईँको माउस प्रयोग
साहसिक समय जीवनको लागि चालु
यो साहसिक समय खेल हो। घर फिर्ता बाटोमा भूत पीछा Finn र जेक, Finn र जेक राजा तपाईंलाई द्रुत भूत उम्कन चलाउन मदत। , हाम फाल्न सम्म तपाईं थप अंक प्राप्त रूपमा चलाउन स्पेस बार प्रयोग गर्नुहोस्।
जेक र Finn अप यो समय के-के हुन्? एक जीवनकालमा को साहसिक लागि तयार!
साहसिक समय खोज
साहसिक समय Games- प्रयोग जेक stretchy शक्ति दुष्ट आफ्नो मित्र उम्कन।
साहसिक समय पागल Halloween
यो हास्यास्पद खेल हो। फिन र जेक हैलोवीन, चकलेट धेरै, को रात मा घोप्टो कद्दू ... तलको, तपाईं सकेसम्म धेरै वस्तुहरू सङ्कलन गर्ने प्रयास
फिन उहाँ स्वर्गमा, जहाँ त्यहाँ बादलसँग सडक हो मा हराउनुभयो भन्ने सपना थियो, तपाईं अझै सम्म त्यहाँ फिन आफ्नो बाटो राम्ररी र सुरक्षित फेला पार्न मद्दत गर्न जाने
साहसिक समय तरवार गुमाए
फिन र जेक राक्षस पास र तरवार प्राप्त गर्न एक तरिका फेला गुफा मा हराएका तरवार, आफ्नो मिशन फेला पार्न छ। साहसिक समय हराएको तरवार
jakes कठिन ब्रेक
se जेक गरेको हटाउन सकिने limbs जादू मानिसको टोपी फेला पार्न र आफ्नो श्राप तोड्न! रमाइलो गर!
साहसिक समय धार्मिक खोज
साहसिक समय धर्मी खोज ooo को भूमि मार्फत एक धार्मिक खोज लिनुहोस्! नायक गरेको Enchiridion लागि खोज, Ninjas को सेनाले संघर्ष र दुष्ट आइस राजा देखि राजकुमारी बबलगम उद्धार। थप के तपाईं माग्न सक्छ? प्ले कार्य-खचाखच भरिएको साहसिक
साहसिक समय आउँदैछ बरफ
साहसिक समय रोलिंग आइस। दालचीनी Bun बरफ राजा देखि Finn र जेक उद्धार मद्दत गर्नुहोस्। साहसिक समय: एक मीठा रोल
3 डी हिउँ Kart र्याली Spongebob
आफ्नो मनपर्ने Nickelodeon वर्ण चयन र यस 3D Nicktoons Kart दौडने मा धातु गर्न पेडल राख्नुहोस्!
खतरा कालकोठरी - आफ्नो मित्र गहिरो तहखाने मा उद्धार र परम टोली निर्माण!
Contra konami फ्लैश
एक वा दुई खेलाडीहरू Konami, विरुद्ध क्लासिक अर्को संस्करण। 8bits ग्राफिक्स संग पुरानो खेल, तर यो अझै पनि खेल्न धेरै मजा छ। सार्न, 1 र2वा जे र K सरल र गोली मार तीर कुञ्जीहरू वा WASD प्रयोग गर्नुहोस्।
, राजकुमार उद्धार गर्न बार्बी राजकुमार सवारी तपाईं सडक मा लग जोगिन र घोडाहरू लागि फल संकलन गर्न बार्बी मदत। सार्न, सरल अन्तरिक्ष पल्ट प्रेस माउस प्रयोग गर्नुहोस्।
Spongebob Undersea जेल
Spongebob जेलको नियन्त्रणमा कुख्यात चोर कैद छन् थिए। अचानक उनलाई केही जेलको देखि बच्ने प्रयास गर्नुहोस्। एक जिम्मेवार जेल गार्ड हुन र escaping.Grab तिनीहरूलाई रोक्न र प्रहरी गस्ती मा escaping चोर ड्रप। यू
Born Of Fire TD involves placing up to seven heroes (three at start, four unlocked) onto the battlefield in order to destroy hordes of monsters. Each unit has different skills, strengths and weaknesses, and the limited range of heroes available means
मारियो सम्भव, कमाउन अंक रूपमा टाढा चलाउन मदत, उपलब्धिहरू र नयाँ दुनिया खोल्न, कौशल र सुधार अपग्रेड!
डोरी मा मारियो
आज मारियो तंग डोरी मा skywalk स्टन्ट गरिरहेको छ। सहायता मारियो डोरी देखि गिर छैन। माउस वा तीर कुञ्जीहरू प्रयोग यो निःशुल्क अनलाइन साहसिक खेल खेल्न!
Earn the most money by beating up the stickman with guns, explosives and others. Ugrade your weapons to do more in this free online game.